माउन्टेन हाइड्रोको नाफा १ करोडभन्दा बढी, ईपीएस कति ? - Arthasansar
माउन्टेन हाइड्रोको नाफा १ करोडभन्दा बढी, ईपीएस कति ?
शुक्रबार, ३१ बैशाख २०७८, १० : ५४ मा प्रकाशित
माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वितीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीले आकर्षण प्रगति गरेको छ ।
प्रसारण लाइन छिटो बनाउन उर्जा उत्पादकहरुको मन्त्रीलाई आग्रह